Waddada Paris: Dhisidda Dhaqaale Low-Carbon leh Maalgelinta iyo Philanthropy
By Elizabeth McGeveran, Aimee Witteman
Toddobaadkan, indhaha oo dhan waxay ku yaallaan Paris iyadoo hoggaamiyeyaasha adduunka ay isugu yimaadaan Shirarka cimilada ee UN si wax looga qabto dhibaatada ugu weyn ee qarniga. Madaxweynaha McKnight Kate Wolford wuxuu noqon doonaa qayb ka mid ah dhacdooyinka taariikhiga ah, ku biiritaanka a Wafdi ka socda maalgashadayaasha ka shaqeynta sidii loo dhisi lahaa fursado maalgashi oo yar yar.
Inkasta oo heshiis caalami ah oo gebi ahaanba ay muhiim tahay, haddana waa inaan aragnaa Paris si aan u sii socono mana ahan meeshii aan ku sugnayn. Baaxadda dhibaatada waxay u baahan tahay hoggaamin geesinimo leh oo joogto ah heer kasta iyo qayb kasta. Maanta, waxaan soo saari doonaa gaaban cusub oo la yiraahdo Waddada Paris: Dhisidda Dhaqaale Low-Carbon leh Maalgelinta iyo Philanthropy, halkaas oo aan la wadaagno mabaadii'da cimilada McKnight ee maal-gashiga iyo maal-gelinta barnaamijyada iyo bixinta tusaalayaal tallaabooyin ah oo aan qaadnay si aan dib-u-dhicin, dib-u-maalgelino, iyo inaan suuqyada u kobcinno. Intaa waxaa dheer, warbixintu waxay muujineysaa afar-dhibcood qaabdhismeedka waxaan soo saarnay taas oo ka baxsan saameynta maal-gashiga iyo ka faa'iideysiga dhererkeena dhammaan si loo dedejiyo mustaqbal hoose oo kaarboon.
Machadka McKnight wuxuu u heellan yahay inuu ka caawiyo Midwest sidii uu u gudbi lahaa dhaqaalaha yar-yar ee kumbuyuutarka waxaana uu muddo dheer taageeri jiray ururrada ka shaqeynaya dhisida bulsho, dhaqaale, iyo deegaan deegaanka ah. Ilaa iyo 1992, McKnight wuxuu $ 140 milyan oo doolar ku deeqay deeqo si ay u ururiyaan mustaqbal hoose oo ka hooseeya ugxan-yar, waxaana dhawaanahan ka faa'idaystay $ 2,2 bilyan oo dakhliga, iyada oo boqolkiiba 10% maalgashadeen istiraatiijiyado xoojinaya hawlgalkayaga.
Laga soo bilaabo 2013, aasaaska ayaa qaaday talaabooyinka soo socda, oo ay ka mid yihiin:
La dhisay oo lagu dhajiyay Istaraatiijiyad Karti Kaarboon oo ah $ 100 milyan oo Mareykan ah oo ay la socoto Maamulka Mellon Capital. Sanduuqa wuxuu yareynayaa aragtideena soosaarayaasha aan habooneyn ee gaaska cagaaran ee qeyb walba waxaana uu reebayaa soosaarayaasha dhuxusha. Sannad-guuraddeeda hal sano ah, waxay si aad ah uga shaqeysay muuqaalka 'Russell 3000 Index' iyadoo hoos u dhigaysa awoodda kaarboonka (qiiqa gaaska cagaaran halkii dollar ee iibka) iyadoo loo marayo wax 53%.1
Waxay $ 45 milyan u qoondeeyeen maalgelin dheeraad ah oo gacan ka geysaneysa horumarinta mustaqbalka tamarta nadiifka ah iyo dhisida bulsho baaxad leh. Maalgashiyada waxaa ka mid ah miisaaniyada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, maalgelinta tooska ah ee shirkadaha yaryar, iyo deymaha hooseeya.
Ka saarida soo saarayaasha dhuxusha iyo shirkadaha leh kaydka dhuxusha 200 oo milyan oo doollar oo dakhli ah.
Nidaamkeena maalgashadeena wuxuu ku amaanayaa deeq-bixiyadayada. Our Barnaamijka Cilmi-baarista iyo Cimilada ee Midwest ujeeddadiisu waa in la kobciyo lana taageero hogaaminta cimilada iyo cimilada ee Midwest, taas oo gobolka ka dhigaysa hoggaamiye heer qaran iyo caalami ah oo wax ka qabta isbeddelka cimilada iyada oo la gaarsiinayo dhimista hawada aqalka dhirta. Sanadkii 2014, waxaan $ 15 milyan oo doolar ku bixinnay deeqo ujeedadoodu tahay sidii loo dhisi lahaa qaybta tamarta nadiifka ah ee tamarta. Barnaamijku wuxuu ka caawiyaa hoggaamiyeyaasha beesha inay kobciyaan, kobciyaan, iyo hormariyaan xalalka dib-u-dejinta ee bixiya faa'iidooyinka dhaqaale, bulsho, iyo deegaanka. Iyadoo taageero weyn u leh kooxaha sida The Alliance Energy Renaisable Energy Alliance, Machadka Great Plains, iyo Xarunta Siyaasadeed ee Bipartisan, waxaan taageernaa dib-u-habeeyn siyaasadeed oo istiraatiijiyadeed iyo kaabayaal ah oo gacan ka geysanaya dib-u-samaynta, is-waafajinta, iyo xoojinta xalalka, oo ka qaybqaataan isbedel ku salaysan isbedel
Waxaan rajeyneynaa inaad heshaan qoraalka cimilada si aad u noqotid khayraad wax ku ool ah oo aad si weyn ugu wadaagno. Wax kasta oo ay ku dhacaan Paris, waa in aynu sii eegnaa si aynu u sii dheereyno, oo tixgelinno in aan dejinno maal-galiyayaasha qalabka badan ee awoodda leh si ay wax uga qabtaan isbedelka cimilada.
Mawduuca: Maalgashiga Saameynta, Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest